Jidka Dawladnimo Iyo Jidka Dawlad La’aanta” Qalinkii Wasiirka Warfaafinta Somaliya” | Baligubadlemedia.com
Jidka Dawladnimo Iyo Jidka Dawlad La’aanta” Qalinkii Wasiirka Warfaafinta Somaliya”
Waxa Qoray Cismaan Dubbe, Wasiirka Warfaafinta Somalia
Todobaadkan dhammaaday waxa warbaahinta qaar la soo geliyey warar been abuur ah oo ku saabsan in Soomaaliya uu qaaliyoobayo hubkii la isku gumaadi jirey. Waxan is weydiiyey tolow maanta miyuu jiraa qof Soomaali ah oo shacab ah oo baahi u qaba qori, xabbad, dil iyo barakac. Jawaabtu waa MAYA, laakiin Rabbi Subxanahu watacaalaa wuxu Suuratal Axzaab isaga oo nebigiisa Muxamad (CSW) la hadlaya ku yidhi “Nebi Allow Ilaahay ka cabso”. Culimadu waxay ku fasiraan aayaddaas xusuusin iyo baraarujin. Sidaas oo kale inkasta oo aan aaminsanahay in aanu jirin qof Soomaali ah oo maanta xiise u qaba in uu qori gato! ama ku laabto jidkii dowlad la’aanta, haddana haddiiba uu jiri karo qof ku fikiri kara qori, xabbad, dirir sokeeye iyo dowlad la’aan waxan rabaa in aan u reebo xusuusin iyo baraarujin.